၂၅ နှဈအတှငျး “ဥ”ပြောကျပွီး အာတီတာပေးတဲ့ အံ့မခနျး မှတျတမျးတှနေဲ့ အာဆငျနယျ – Sports A2Z
အာဆငျနယျအသငျးဟာ အိမျကှငျးမှာ ဗီလာရီးရဲလျကို တဈဂိုး-ဂိုးမရှိနဲ့ အနိုငျရရုံနဲ့ ဗိုလျလုပှဲကို တကျရောကျနိုငျမယျ့အခြိနျမှာ စိတျဓာတျမရှိ၊ ဗြူဟာမရှိ၊ ခံယူခကျြမရှိတဲ့ ကစားပုံတှနေဲ့ ကစားပွီး ဘဲဥမကှဲခဲ့ခြိနျမှာ တဈရာသီလုံး ဘာဖလားနဲ့မှ မနီးစပျနိုငျမှုတှနေဲ့အတူ နောကျတဈရာသီမှာလညျး ဥရောပဝငျခှငျ့ ပြောကျပွီး ဥပုသျစောငျ့ရတော့မယျ့ အနအေထားကို ရောကျရှိလာခဲ့ပါပွီ။
Trust the Process လုပျနတေဲ့ ပဲ့ကိုငျရှငျ မီခယျလျ အာတီတာကတော့ အသငျးကို ထိနျးကြောငျးကိုငျတှယျနိုငျမှု၊ စိတျဓာတျမွှငျ့တငျမှု၊ မောငျးနှငျနိုငျမှု၊ ယုံကွညျရမှုတှကေို ပိုငျဆိုငျမထားတော့ခြိနျမှာ ခရိုယနျကီတှနေဲ့ တဈကွိတျတညျး တဈဉာဏျတညျး ပုလငျးတူဘူးဆို့အဖွဈ နာမညျတပျ ခံခဲ့ရပွီး ဒီရာသီမှာတော့ သူရယူပေးခဲ့တဲ့ အာဆငျနယျရဲ့ ၂၀၂၀-၂၁ ရာသီ အံ့မခနျး မှတျတမျးတှကေို စုစညျးပေးလိုကျပါတယျ။
၁။ အာဆငျဝငျးဂါးကို မကျြနှာဖကျြပွီး ဥပြောကျမယျ့ အာဆငျနယျ
အာဆငျနယျအသငျးကို ဆယျကြျောသကျအရှယျကတညျးက စတငျအားပေးခဲ့ကွတဲ့သူတှအေတှကျတော့ ဒီရာသီရလဒျဟာ လာမယျ့ရာသီမှာ သူတို့ကို အောကျဆုံးထိအောငျ အနှိမျခံလိုကျရပွီလို့ ခံစားမိကွမှာဖွဈပွီး ၁၉၉၆ ခုနှဈနောကျပိုငျး နညျးပွကွီး ဝငျးဂါးရယူနကြေ ဥရောပဝငျခှငျ့တှကေို လုံးဝမရတော့မယျ့ ရာသီသဈကို ဖွတျသနျးကွရတော့မှာပါ။
၂။ အဆငျ့ ၁၀ နားက ဇျောကနျ့လနျ့အသငျးလား
အထကျမရောကျ အောကျမရောကျ ဇျောကနျ့လနျ့လို့ ဆိုရမယျ့ အသငျးအတှကျ အူနိုငျး အမျမရီ ညံ့လှပါပွီဆိုပွီး ထုတျပယျလိုကျခြိနျမှာ သူ့ရဲ့ အဆငျ့ ၅ ကိုတောငျ မရနိုငျတော့ဘဲ မနှဈက အဆငျ့ ၈၊ ဒီနှဈမှာတော့ တဈပှဲကနျြ ဗီလာထကျ တဈမှတျအသာ အဆငျ့ ၉ မှာ ရပျတညျနပွေီး ဒီပုံစံနဲ့တော့ ကြျောတကျခံရဦးမှာလညျးဖွဈပါတယျ။ လာမယျ့ ပှဲစဉျ ၃၅ က စလို့ ဝကျဈဘရှနျး၊ ခြဲလျဆီး၊ ပဲလစျေ့၊ ဘရိုကျတနျတို့နဲ့ အစဉျလိုကျတှဆေုံ့ဦးမယျ့ အာဆငျနယျတို့ ရာသီကုနျ ဘယျနားမှာ ရပျတညျဦးမှာတဲ့လဲ?
၃။ စောစောစီးစီး တာ့တာပွတဲ့ FA ဖလား
မနှဈက အသငျးကွီးတှကေို နောကျတနျးမှာ ပိတျကစား၊ အောကျက လှနျခှပျပွီး အရယူသှားခဲ့တဲ့ အကျဖျအဖေလားကို အာဆငျနယျတို့ တောငျပိုငျးကမျးခွမှော ပရီးမီးယားလိဂျနဲ့ ဒီဖလား နှဈပှဲဆကျကနျခဲ့ရတဲ့ ဆောကျသမျတနျနဲ့ပှဲမှာ အသငျးငယျတဈသငျးရဲ့ ကစားပုံနဲ့ လကျလှတျခဲ့ရပါတယျ။ ခနျြပီယံအသငျးရဲ့ ရောကျရှိခဲ့တဲ့ အဆငျ့ကတော့ စတုတ်ထအဆငျ့ ရှုံးထှကျပါတဲ့။
၄။ လကျစတာကို ၄၇ နှဈ အိမျကှငျးမှတျတမျးကြိုးတဲ့ပှဲ
မှတျတမျးတှဆေိုတာဟာ အသငျးတှအေတှကျတော့ အရေးပါပွီး ကွံဖနျဂုဏျယူနိုငျသလို စိတျဓာတျခှနျအားကို ပေးစှမျးတဲ့ အရာတှလေညျး ဖွဈပါတယျ။ ဘယျအသငျးဆိုတာ ငယျနိုငျလို့ ပွောလို့ရတဲ့ ဝငျ့ကွှားနိုငျမှုတှလေညျးဖွဈပွီး ဒါကိုတော့ ပှဲစဉျ ၆ ရဲ့ မိနဈ ၆၀ မှာ လူစားဝငျလာခဲ့တဲ့ ဗာဒီက မိနဈ ၂၀ အကွာမှာ ခေါငျးတိုကျဂိုးနဲ့ အဆုံးသတျပေးလိုကျတာပါ။
၅။ ၉၂ နှဈအတှငျး ဗီလာကို အိမျကှငျးမှာ ရှုံးတဲ့ အာဆငျနယျ
အကျစတနျဗီလာအသငျးကို အာဆငျနယျတို့ အိမျကှငျးမှာ မရှုံးခဲ့တာဟာ ရာစုနှဈတဈစုနီးပါး ရှိခဲ့ပွီဖွဈပါတယျ။ ဒီအသငျးကို အကျဖျအဖေလား ဗိုလျလုပှဲမှာ လေးဂိုး-ဂိုးမရှိနဲ့ အရှကျခှဲခဲ့ဖူးတာက ဒီတဈကွိမျမှာ ဝဋျလညျခဲ့တာဖွဈပွီး ဆာကာရဲ့ Own Goal မှာ အိုလီ ဝပျကငျးဈရဲ့ သှငျးဂိုးနှဈဂိုး ပေါငျးပွီး အမျးမရိတျမှာ ၉၂ နှဈစာ အရှကျကှဲခဲ့သလို ဗီလာကှငျးမှာပါ ထပျပွီး အရှုံးပေးခဲ့ရပါတယျ။
၆။ ဘနျလနေဲ့ ၄၆ နှဈတာ မှတျတမျး ကြိုးပကျြ
ဘနျလဆေိုတာ အာဆငျနယျအသငျးအဖို့တော့ ငယျနိုငျအသငျးတဈသငျးပါ။ ဒါပမေယျ့ အလှဲတှေ လုပျတတျပွီး အမှားမြားသူတှနေဲ့ စိတျမထိနျးနိုငျသူတှကေို နရောပေးတတျတဲ့ အာတီတာအတှကျတော့ ခြာကာအထုတျခံရပွီး အူဘာမီယနျးက ကိုယျ့ဂိုးကိုယျသှငျးတဲ့ ဝါရငျ့တှရေဲ့ ပေးဆပျမှုနဲ့ အိမျကှငျးမှာ ဘနျလကေို ၄၆ နှဈအတှငျး မရှုံးတဲ့ စံခြိနျ ကြိုးပကျြသှားပါတယျ။
၇။ အဲဗာတနျကို နှဈကြော့စလုံး ဒူးထောကျခဲ့ရတဲ့ အာတီတာ
အနျဆယျလော့တီမို့လို့ အဲဗာတနျတို့ တိုးတကျကောငျးမှနျလာလို့ဆိုပွီး ဆငျခွပေေးရငျတော့ ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကှငျးထဲက ခွစှေမျးက ဒီလောကျ မခွားနားခဲ့ခြိနျမှာ အမှားတှကေ ပိုကစားပွောခဲ့ပွီး ပထမအကြော့က ဟိုးလျဒငျးရဲ့ Own Goal နဲ့ ဒုတိယအကြော့က လီနိုရဲ့ ဂိုးသမား မပီသဘဲ လကျထဲက လှတျကပြွီး ပေးလိုကျရတဲ့ Own Goal တှကေ ရငျနာစရာဖွဈခဲ့ရပွီး အသငျးရဲ့ စိတျဓာတျပိုငျးနဲ့ ခေါငျးဆောငျမှု၊ အာတီတာနဲ့ စညျးလုံးမှုတှကေို မေးခှနျးထုတျစရာဖွဈလာခဲ့ကွောငျး ဖျောပွလိုကျရပါတယျ။
ZAWGYI: အာဆင်နယ်အသင်းဟာ အိမ်ကွင်းမှာ ဗီလာရီးရဲလ်ကို တစ်ဂိုး-ဂိုးမရှိနဲ့ အနိုင်ရရုံနဲ့ ဗိုလ်လုပွဲကို တက်ရောက်နိုင်မယ့်အချိန်မှာ စိတ်ဓာတ်မရှိ၊ ဗျူဟာမရှိ၊ ခံယူချက်မရှိတဲ့ ကစားပုံတွေနဲ့ ကစားပြီး ဘဲဥမကွဲခဲ့ချိန်မှာ တစ်ရာသီလုံး ဘာဖလားနဲ့မှ မနီးစပ်နိုင်မှုတွေနဲ့အတူ နောက်တစ်ရာသီမှာလည်း ဥရောပဝင်ခွင့် ပျောက်ပြီး ဥပုသ်စောင့်ရတော့မယ့် အနေအထားကို ရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။
Trust the Process လုပ်နေတဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင် မီခယ်လ် အာတီတာကတော့ အသင်းကို ထိန်းကျောင်းကိုင်တွယ်နိုင်မှု၊ စိတ်ဓာတ်မြှင့်တင်မှု၊ မောင်းနှင်နိုင်မှု၊ ယုံကြည်ရမှုတွေကို ပိုင်ဆိုင်မထားတော့ချိန်မှာ ခရိုယန်ကီတွေနဲ့ တစ်ကြိတ်တည်း တစ်ဉာဏ်တည်း ပုလင်းတူဘူးဆို့အဖြစ် နာမည်တပ် ခံခဲ့ရပြီး ဒီရာသီမှာတော့ သူရယူပေးခဲ့တဲ့ အာဆင်နယ်ရဲ့ ၂၀၂၀-၂၁ ရာသီ အံ့မခန်း မှတ်တမ်းတွေကို စုစည်းပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ အာဆင်ဝင်းဂါးကို မျက်နှာဖျက်ပြီး ဥပျောက်မယ့် အာဆင်နယ်
အာဆင်နယ်အသင်းကို ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကတည်းက စတင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့သူတွေအတွက်တော့ ဒီရာသီရလဒ်ဟာ လာမယ့်ရာသီမှာ သူတို့ကို အောက်ဆုံးထိအောင် အနှိမ်ခံလိုက်ရပြီလို့ ခံစားမိကြမှာဖြစ်ပြီး ၁၉၉၆ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း နည်းပြကြီး ဝင်းဂါးရယူနေကျ ဥရောပဝင်ခွင့်တွေကို လုံးဝမရတော့မယ့် ရာသီသစ်ကို ဖြတ်သန်းကြရတော့မှာပါ။
၂။ အဆင့် ၁၀ နားက ဇော်ကန့်လန့်အသင်းလား
အထက်မရောက် အောက်မရောက် ဇော်ကန့်လန့်လို့ ဆိုရမယ့် အသင်းအတွက် အူနိုင်း အမ်မရီ ညံ့လှပါပြီဆိုပြီး ထုတ်ပယ်လိုက်ချိန်မှာ သူ့ရဲ့ အဆင့် ၅ ကိုတောင် မရနိုင်တော့ဘဲ မနှစ်က အဆင့် ၈၊ ဒီနှစ်မှာတော့ တစ်ပွဲကျန် ဗီလာထက် တစ်မှတ်အသာ အဆင့် ၉ မှာ ရပ်တည်နေပြီး ဒီပုံစံနဲ့တော့ ကျော်တက်ခံရဦးမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ လာမယ့် ပွဲစဉ် ၃၅ က စလို့ ဝက်စ်ဘရွန်း၊ ချဲလ်ဆီး၊ ပဲလေ့စ်၊ ဘရိုက်တန်တို့နဲ့ အစဉ်လိုက်တွေ့ဆုံဦးမယ့် အာဆင်နယ်တို့ ရာသီကုန် ဘယ်နားမှာ ရပ်တည်ဦးမှာတဲ့လဲ?
၃။ စောစောစီးစီး တာ့တာပြတဲ့ FA ဖလား
မနှစ်က အသင်းကြီးတွေကို နောက်တန်းမှာ ပိတ်ကစား၊ အောက်က လှန်ခွပ်ပြီး အရယူသွားခဲ့တဲ့ အက်ဖ်အေဖလားကို အာဆင်နယ်တို့ တောင်ပိုင်းကမ်းခြေမှာ ပရီးမီးယားလိဂ်နဲ့ ဒီဖလား နှစ်ပွဲဆက်ကန်ခဲ့ရတဲ့ ဆောက်သမ်တန်နဲ့ပွဲမှာ အသင်းငယ်တစ်သင်းရဲ့ ကစားပုံနဲ့ လက်လွှတ်ခဲ့ရပါတယ်။ ချန်ပီယံအသင်းရဲ့ ရောက်ရှိခဲ့တဲ့ အဆင့်ကတော့ စတုတ္ထအဆင့် ရှုံးထွက်ပါတဲ့။
၄။ လက်စတာကို ၄၇ နှစ် အိမ်ကွင်းမှတ်တမ်းကျိုးတဲ့ပွဲ
မှတ်တမ်းတွေဆိုတာဟာ အသင်းတွေအတွက်တော့ အရေးပါပြီး ကြံဖန်ဂုဏ်ယူနိုင်သလို စိတ်ဓာတ်ခွန်အားကို ပေးစွမ်းတဲ့ အရာတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်အသင်းဆိုတာ ငယ်နိုင်လို့ ပြောလို့ရတဲ့ ဝင့်ကြွားနိုင်မှုတွေလည်းဖြစ်ပြီး ဒါကိုတော့ ပွဲစဉ် ၆ ရဲ့ မိနစ် ၆၀ မှာ လူစားဝင်လာခဲ့တဲ့ ဗာဒီက မိနစ် ၂၀ အကြာမှာ ခေါင်းတိုက်ဂိုးနဲ့ အဆုံးသတ်ပေးလိုက်တာပါ။
၅။ ၉၂ နှစ်အတွင်း ဗီလာကို အိမ်ကွင်းမှာ ရှုံးတဲ့ အာဆင်နယ်
အက်စတန်ဗီလာအသင်းကို အာဆင်နယ်တို့ အိမ်ကွင်းမှာ မရှုံးခဲ့တာဟာ ရာစုနှစ်တစ်စုနီးပါး ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသင်းကို အက်ဖ်အေဖလား ဗိုလ်လုပွဲမှာ လေးဂိုး-ဂိုးမရှိနဲ့ အရှက်ခွဲခဲ့ဖူးတာက ဒီတစ်ကြိမ်မှာ ဝဋ်လည်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဆာကာရဲ့ Own Goal မှာ အိုလီ ဝပ်ကင်းစ်ရဲ့ သွင်းဂိုးနှစ်ဂိုး ပေါင်းပြီး အမ်းမရိတ်မှာ ၉၂ နှစ်စာ အရှက်ကွဲခဲ့သလို ဗီလာကွင်းမှာပါ ထပ်ပြီး အရှုံးပေးခဲ့ရပါတယ်။
၆။ ဘန်လေနဲ့ ၄၆ နှစ်တာ မှတ်တမ်း ကျိုးပျက်
ဘန်လေဆိုတာ အာဆင်နယ်အသင်းအဖို့တော့ ငယ်နိုင်အသင်းတစ်သင်းပါ။ ဒါပေမယ့် အလွဲတွေ လုပ်တတ်ပြီး အမှားများသူတွေနဲ့ စိတ်မထိန်းနိုင်သူတွေကို နေရာပေးတတ်တဲ့ အာတီတာအတွက်တော့ ချာကာအထုတ်ခံရပြီး အူဘာမီယန်းက ကိုယ့်ဂိုးကိုယ်သွင်းတဲ့ ဝါရင့်တွေရဲ့ ပေးဆပ်မှုနဲ့ အိမ်ကွင်းမှာ ဘန်လေကို ၄၆ နှစ်အတွင်း မရှုံးတဲ့ စံချိန် ကျိုးပျက်သွားပါတယ်။
၇။ အဲဗာတန်ကို နှစ်ကျော့စလုံး ဒူးထောက်ခဲ့ရတဲ့ အာတီတာ
အန်ဆယ်လော့တီမို့လို့ အဲဗာတန်တို့ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာလို့ဆိုပြီး ဆင်ခြေပေးရင်တော့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကွင်းထဲက ခြေစွမ်းက ဒီလောက် မခြားနားခဲ့ချိန်မှာ အမှားတွေက ပိုကစားပြောခဲ့ပြီး ပထမအကျော့က ဟိုးလ်ဒင်းရဲ့ Own Goal နဲ့ ဒုတိယအကျော့က လီနိုရဲ့ ဂိုးသမား မပီသဘဲ လက်ထဲက လွတ်ကျပြီး ပေးလိုက်ရတဲ့ Own Goal တွေက ရင်နာစရာဖြစ်ခဲ့ရပြီး အသင်းရဲ့ စိတ်ဓာတ်ပိုင်းနဲ့ ခေါင်းဆောင်မှု၊ အာတီတာနဲ့ စည်းလုံးမှုတွေကို မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။